क्यूवा आमाबाट बच्चामा सर्ने एच.आई.भी. संक्रमण रोक्न सफल
क्यूवा, असार २५ । क्यूवा महिलालाई समयमै प्रसवपूर्व यौन रोगहरूको जाचँ सुविधा उपलब्ध गराएकाले गर्भ मै आमाबाट बच्चामा सर्ने एच .आई भी. संक्रमण रोक्न सफल पहिलो राष्ट्र भएको छ ।
काबूल, असार २४ । अफगानी संसदले राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित महिला न्यायधिसलाई अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपति असरफ घानीले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीसमा मनोनित गरेर पठाएको अनिसा रासोलीलाई अस्वीकार गरेको हो ।
अभिभावक बन्न बाबु चाहिँदैन : भारतीय सर्वोच्च अदालत
नयाँ दिल्ली, असार २३ । भारतीय सर्वाेच्च अदालतले अविवाहित महिला अभिभावक बन्न बच्चाको बुवाको नाम खुलाउन नपर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले आमाले बच्चाको कानुनी रुपमा अभिभावक बन्न बाबुको अनुमति चाहिने आफ्नै निर्णयलाई उल्ट्याउदै यस्तो फैसला गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
प्रहरीले थाना मै जिउँदै जलाए महिला
भारतको उत्तर प्रदेशमा प्रहरीबाट थाना भित्रै जलाइएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । ती महिलाले घुस दिन अस्वीकार गरेपछि दुईजना प्रहरीले उनलाई आगो लगाएको बीबीसीले जनाएको छ । प्रहरीद्वारा जलाईएकी नितु दवाडीलाई ८० प्रतिशत जलेको अवस्थामा लखनउ अस्पतालमा लगिएको थियो ।
अफगानिस्तानको सर्वाेच्च अदालतमा पहिलो महिला न्यायाधीस
अफगानिस्तान,असार २१ । अफगानिस्तानले पहिलो पटक सर्वाेच्च अदालतमा महिला न्यायाधीस नियुक्त गरेको छ । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले अनिसा रासोलीलाई देशकै पहिलो महिला न्यायाधीस नियुक्त गर्नुभएको हो ।
हिलारी क्लिण्टनद्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अभियान सुरु
एजेन्सी, असार १ । आउँदो वर्ष हुने अमेरीकाको राष्ट्रतीय निर्वाचनका लागि हिलारी क्लीण्टनले राष्ट्रपति पदमा औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् ।
महिला अधिकारका लागि अनौठो ड्रेस
क्यानाडा,जेठ २७ । क्यानाडामा एक किशोरीले महिला अधिकारका लागि अनौठो अभियान शुरु गरेकी छन् ।
क्यानाडाकी १८ वर्षीया इरीनी पइस्लेले ‘मैल पढ्ने मौका पाएँ, तर सबै महिलाले यो अधिकार पाएका छैनन्’